အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ဆိုလိုတာပါ။ ကျနော်တို့ရုံအားလုံးလိင်များအတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ပြီးပြည့်စုံသောစုဆောင်းခြင်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြပြီးနေပါစေသင်ကစားချင်သောအရာကိုလျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ,သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာကစားပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့ဒီပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေဟာလိင်စိတ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတာငါတို့သိတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာလိင်တူချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးယောက်ျားတိုင်းကတော့လိင်တူချစ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်,ငါတို့သည်သင်တို့အဓိကအားဖြင့်သင်ဆွဲဆောင်သောအရာကိုပျော်မွေ့နိုင်မည့်စုဆောင်းမှု၌ရှိသမျှသောဤဂိမ်းရှိသည်,နှင့်လည်းသင်သည်သင်၏လိင်စိတ်၏အခြားရှုထောငျ့သို့သင့်ရဲ့ခြေချောင်း,လက်ချောင်းများနှင့်ငပဲအကြံပေးချက်များနှစ်ရ., သငျသညျအစဉျအမွဲကခြံစည်းရိုး၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်ခံစားရပုံကိုတွေးမိလျှင်,ယခုကသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ လိင်ဂိမ်းတွေဆိုတာခြံစည်းရိုးတွေမရှိတဲ့နေရာကညစ်ညမ်းကမ္ဘာကြီးဖြစ်လို့ပါ။
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှကြွလာသောအခါလူတိုင်းမသက်သာကြောင်းကိုသိသောကြောင့်,ငါတို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့လွတ်မြောက်ရန်နှင့်ဤစုဆောင်းမှုကိုခံစားဖို့ပိုပြီးအကြောင်းပြချက်ရောက်စေဖို့ချင်တယ်။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏နည္းလမ္းတစ္ခုမွာမိမိတို႔၏ဆိုက္တြင္ရွိေသာအေတြ႔အၾကံဳသည္လံုး၀မရွိ၊လံုး၀မရွိဟုလူတိုင္းကိုေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကိုမေးသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရန်ဘယ်တော့မှမသာဤနေရာတွင်သမ္မာသတိနှင့်ပတ်သက်.ဒါအလေးအနက်ဖြစ်ကြောင်း,ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အိုင်ပီဖတ်ဘယ်တော့မှစာဝှက်ထားတဲ့ဆာဗာများ. အင်တာနက်နှင့်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။, သင်လည်းဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုဆိုပါတယ်၊သင်လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းနေပြီးပြန်လာဖို့ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီသင်ဒီမှာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဂိမ်းကြိုးစားပါလိမ့်မယ်သည့်အခါမှသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အားလုံးဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
သငျသညျအရေးအသားရရှိသူလူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့ဆိုက်တည်ဆောက်သောအခါ,သင်အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၿပီးေတာ့ဒီဆိုဒ္မွာသူတို႔ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ရဲ့ကစားလူများ၏အရေအတွက်၏နိုင်ရန်အတွက်ထိုသူအပေါင်းတို့အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ခင္ဗ်ားတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုပဲအမ်ိဳးသားေတြဟာအသုံးအမ်ားဆုံးကစားသမားေတြျဖစ္ၿပီးေျခစြမ္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေျပာေနၾကတာပါ။ သင်တစ်ဦးဖြောင့်ကောင်လေးဆိုရင်,သင်ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှရှိသည်သားငယ်များအမျိုးမျိုးကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။ လိင်ဆက်ဆံရာမှာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဒိုင်ယာလော့ခ်တွေမှာသူတို့ကိုပိုတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်ကျော်ကြားယင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရ။, တကယ္လို႔ သင္ဟာလူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ဒီကမာေကာင္ဟာသင့္ရဲ႕ သမုဒၵရာတစ္ခုလံုးကို
သင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုရင်၊သင်သည်လည်းအများအပြားဂိမ်းရသင်ဖြောင့်၊ဇီသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူဆိုရင်အရေးမပါဘူး။ ကျနော်တို့လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှသုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ လိင်တူချစ်သူဂိမ်းကစားလိုသောအမျိုးသားများသည်လိင်ဂိမ်းများကိုဖြတ်သန်းသင့်သည်။ သူတို့ပျော်ရွင်ဖို့အမာခံအရာတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပါ။စီနီယာ၊ဂန်ဒိုဂန်၊ဂန်ဒိုဂန်၊ဂန်ဒိုဂန်၊ဂန်ဒိုဂန်၊ဂန်ဒိုဂန်စတဲ့ကစားနည်းတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပါ။
ကွီးမွတျဂိမ်းမှကြွလာသောအခါ,ငါတို့အများအားဖြင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဂိမ်းအကြောင်းပြောဆို. လိင်တူချစ်သူဂိမ်းတွေဟာအမြဲတမ်းဖြောင့်မတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများသည်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအတွက်စုံလင်သည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်ကယ့်ကိုလူကြိုက်များမယ့်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ခြင်း,အိမ်မှာသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရွေးချယ်အသက်ရှင်ဖို့မရကြဘူးသူကိုစွယ်စုံနှင့်စက်ဘီးယောက်ျားတွေ၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဒါကြောင့်,သူတို့လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့နှင့်လက်ဆင့်ကမ်းကမ္ဘာတွင်ပျော်မွေ့., ကျနော်တို့မည်သည့်လမ်းအတွက်ကစားသမားမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်းကိုဘယ်တော့မှကတည်းကမသိလမ်းရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့လည်းစပ်စုအမှုနေသောကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု၏အညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောရှမ်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းဆိုဒ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚမွာအျခားသူေတြနဲ႔ေရာေရာေႏွာေႏွာေပ်ာ္ပါးေနၾကတာကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ လူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ သင်ဒီမှာတစ်ကိုယ်တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂိမ်းကစားနိုင်ပြီးသူတို့၏အန်စာတုံးကိုနို့စို့နေစဉ်သူတို့၏ပါးစပ်ထဲတွင်သွားဖုံးကိုကူညီနိုင်သည်။ သငျသညျယောက်ျားနှင့်ထောင်ချောက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်ထောင်ချောက်များနှင့်အမျိုးသားများနှင့်အတူအစည်းအဝေးများပျော်မွေ့နိုင်ပါ။ ပြီးတော့သူတို့အားလုံးရဲ့ဖိုက်တင်တွေ၊တွန်းအားတွေ၊တွန်းအားတွေ၊တွန်းအားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။